Guraandhalaa 20, 2021
Filannoo Guutuu biyyaa baatii Waxabajjii dhufuu Itiyoophiyaa keessatti gaggeeffamuuf jiru irratti hirmaachuuf paartileen siyaasaa qophii isaanii itti fufanii Jiru.
Bordiin Filannoo Biyyooleessaa dhiyeenya kana paartilee siyaasaa adda addaa waliin wal ga'ee haala amma jiru irratti ibsa kennuun marii gaggeessee ture. Paartilee Oromoo walgahii kana irratti argaman fi filannootti hirmaachuuf qophii gochaa jiran haasoofsiifnee jirra.
Paartiin Kongreesa Federaalawa Oromoo irraa Proofeesar Mararaa Guddinaa akka jedhanitti rakkoon siyaasaa utuu hin furamiin filannoo gaggeessuun rakkisaaa ta'uu, namoota filannoo rawwachisuuf Bordiin Filannoo Oromiyaa keessatti bobbaasu kuma shantama caalaan kan uummata naannoon beekaman miti, akkasumas dandeetti gahaa hin qaban jedhu.
Kana malees hogganoonni paartii isaanii hidhamuu fi waajiroonni isaanii cufamuu dabalatee gaaffileen bu'uuraa kaafne 5 deebii hin arganne jedhan, Proofeesar Mararaan. Adda Bilisummaa Oromootti Itti-gaafatamaan Sab-qunnamtii Obbo Battee Urgeessaa akka jedhanti iyyata fuula 39 dhiyeeffannee deebiin nuuf hin kennemne, waajirri keenya Gullaallee jiru fi kanneen biroon cufamanii jiru akkasumas hogganoonni dhaaba keenyaa 26 caalaan hidhamanii, garii manni murtii bilisa akka gad-lakkifaman ajajee poolisiin didee ugguree, kaan immoo otuu mana murtiitti dhiyaatiin waggaaf ka'aman, jechuun himatan.
Guraandhala 8, 2013 kaadhimamtoota filannoo dhiyeessuun jalqabama jedhamus nuti garuu rakkoon keenya deebii waan hin argatiiniif jecha danqamne jirra, jedhu Obbo Battee Urgeessaa.